Akụkọ - 30th Shanghai International Hospitality Equipment & Food service EXPO
Lọ ọrụ: Shanghai Copak Industry Company LTD
Adreesị: National Exhibition and Convention Center (Shanghai).
No.333 Songze Okporo ụzọ, Xujing Town, Qingpu District, Shanghai
Booth Nke: 2.2G30
Ngwaahịa: PET iko maka ihe ọverageụverageụ, iko PET omenala, karama PET maka ihe ọverageụ ,ụ, Omenala PET omenala, efere akwụkwọ, efere kraft akwụkwọ na ihe ndị ọzọ.
Oge: 29th-Mar rue 1abụrụ Eprel 2021
21lọ oriri na ọ Shangụ Shangụ Shanghai Shanghai ga-abịa na New Ọnọdụ - National Exhibition and Convention Center (Shanghai). HOTELEX Shanghai ga-ebuli ya gaa na ngalaba 12 dị mkpa: Nchịkọta nri na onunu, Ihe eji edozi nri, nri kọfị, kọfị na tii, nri, ihe ọ Beụ ,ụ, ime achịcha. Akụrụngwa na akụrụngwa, akụrụngwa akụrụngwa na akụrụngwa, Mmanya Na-egbu egbu, Nchịkwa nri na ngwa, Nchịkọta nri na nri, yana Franchisees & Inye ego.
Anyị ga-ewere ụfọdụ ọhụụ ọhụụ nke iko ọ beụ Pụ PET na karama ihe ọverageụ bowụ PET na efere akwụkwọ na ngosi a. Nwere ike ịhọrọ ihe ọ bụla ịchọrọ ma jụọ maka nkwupụta na ụlọ ntu anyị.
PET iko dịgasị 1oz ka 32oz, The ibu nwere ike gbanwee dị ka ndị ahịa chọrọ. E gosipụtara ụfọdụ nlele n'oge ngosi a. Nwere ike ịlele anyị mma, doo anya, na nother nkọwa. Free samples nwekwara dị. Akara mbipụta akwụkwọ nkwado na-akwado, ị nwere ike ịgwa ndị anyị nkọwa zuru oke na ngosi ahụ.
PET karama nwere ọtụtụ nhọrọ na ọdịdị na mpịakọta na okpu. Nwere ike ị nwere ike ịkpụzi karama PET, karama PITA gbara gburugburu, karama PET ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọzọ. Olu dị iche site na 6oz ruo 32oz. Nwekwara ike ịhọrọ agba doro anya ma ọ bụ agba ndị ọzọ. A na-anabata mbipụta Logo. Igwe akụrụngwa anyị na-akpaghị aka nwere ike ibipụta logo gị ruo agba isii.
Akwụkwọ ọkwá nwere PE liner, PLA liner, Aluminium liner. Ha zuru oke maka nri ọkụ na oyi. You nwere ike ịhọrọ ọkwá anyị ịkọkọta salad, akwụkwọ nri, ncha, osikapa, noddle na na. Enwere okpu ejikere nke PP, PET, ihe akwụkwọ. Nwere ike ịhazi ọkwá ndị kwesịrị ekwesị dị ka eji eji.
Picturesfọdụ foto nke ihe ngosi anyị: